म कसरी गुगल पेनल्टिको पहिचान र समाधान गर्न सक्छु? - Semalt बाट जवाफ
गुगलको घोषित लक्ष्य उत्तम संभव तरिकामा प्रयोगकर्ताको खोज इरादा पूरा गर्न हो। यसको मतलव यो छ कि खोजी ईन्जिनले खोजी क्वेरीमा यसको 'दृश्य' अनुरूप रहेको सामग्री अनुरूप अनुक्रमणिकामा पृष्ठहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ।
टेक्नोलोजीसँग (स्मार्ट फोनहरू, स्मार्ट उपकरणहरू) प्रयोगकर्ता ब्यवहार पनि निरन्तर विकसित हुँदैछ, जसले फलस्वरूप खोजी एल्गोरिदमको निरन्तर थप विकास र वेबमास्टर्सका लागि गुगल दिशानिर्देशनतर्फ लैजान्छ।
उदाहरण को लागी: विशाल खोज इन्जिन तथाकथित कालो टोपी एसईओ को माध्यम बाट द्रुत रैंकिंग प्राप्त गर्न को लागी मन पराउँदैन। जो कोहीले पनि यी दिशानिर्देशहरूको पालना गर्दैन तिनीहरूलाई सजाय दिइनेछ र तथाकथित गुगललाई दिइनेछ। Google को अपडेटहरूमा पनि यही लागू हुन्छ, जुन हामीमा अपरिहार्य रूपमा हामीमा फर्किन्छ।
म कसरी गुगल पेनल्टी चिन्न सक्छु?
तपाईले गुगल पेनल्टीका लक्षणहरूलाई तपाईको वेबसाइटको दृश्यतामा गिरावट र व्यक्तिगत, यूआरएल, कुञ्जीशब्द वा पूरै वेबसाइटको रैंकिंगको द्रुत क्षतिको साथ पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो तपाइँको वेबसाइटमा कुनै ठूलो परिवर्तन नगरीकन (उदाहरणका लागि रोबोट.टक्सट फाइलमा परिवर्तन हुन्छ जुन तपाइँको साइटको क्रलि cra नियन्त्रण गर्दछ!)। त्यसो भए यो गुगल पेनल्टी हुन सक्छ।
XOVI सुइटमा, तपाईंको साइटको दृश्यता OVI द्वारा देखाईन्छ, अनलाइन मूल्य सूचकांकको लागि छोटो। यदि यो अचानक ढल्छ भने, यो गुगल जरिवानाको सूचक हुन सक्छ।
गुगल एनालिटिक्स मा एक नजर पनि मद्दत गर्न सक्छ। किनभने, एक नियमको रूपमा, महत्वपूर्ण र्या losses्कि losses घाटा ठूलो ट्राफिक घाटाको साथ हातमा जान्छ। म्यानुअल पेनल्टीको घटनामा तपाईलाई गुगल खोजी कन्सोलमा सूचित गरिनेछ।
गुगल पेनल्टीलाई के ट्रिगर गर्दछ?
गुगल पेनल्टीको कारण फरक हुन सक्छ। हालसालका वर्षहरूमा धेरै Google का परिणामहरूको परिणामहरू दण्डको परिणाम हो। खोजी ईन्जिनहरू झन् झन् बौद्धिक हुँदै गइरहेका छन् र बढ्दो टेक्नोलोजीको साथ विकसित भई मानव भाषा र प्रयोगकर्ता ब्यवहारसँग झन् झन् अनुकूलित हुँदैछन्।
यस दिशामा अन्तिम ठूलो अपडेट बीईआरटी हो, जसले एनएलपीलाई धन्यवाद दिन्छ अक्टूबर २०१ 2019 पछि खोज इञ्जिनको भाषा बुझ्ने उन्नयन र सीमाहरू द्वारा सुधार गरिएको छ। नतिजाको रूपमा, "राम्रो सामग्री" पठाउन र विस्तार गर्ने क्रममा रहेका कारकहरू। यदि तपाइँको साइट (अब उपरान्त) राख्न सक्नुहुन्न, यसको परिणामस्वरूप Google दण्ड हुन सक्छ।
एउटा उदाहरण पाडा अपडेट हो, जसले पातलो सामग्रीको छोटो काम गर्‍यो - र यसरी ती वेबमास्टरहरू र एसइओहरूको बिल असफल गर्‍यो जसले सानो सामग्रीको साथ सम्भव भएसम्म धेरै यूआरएलहरू सिर्जना गरे (र प्रयोगकर्ताको लागि कम उपयोगी)।
त्यसोभए पेंग्विन अपडेट छ, जसले अप्रासंगिक सामग्रीको लि buying्क खरीदमार्फत विशाल लिंक भवनको अन्त्य गर्दछ।
गुगलका धेरै अद्यावधिकमा असंख्य दण्डहरू थिए किनकि सम्बन्धित डोमेनहरूले पहिले त्यस्तो उपायहरू लिएका थिए जुन नयाँ गुगल दिशानिर्देशहरूको पालना गर्दैन।
यद्यपि, प्रयोगकर्ताहरूसँग गुगलमा स्प्यामको रूपमा पृष्ठ रिपोर्ट गर्ने विकल्प पनि छन्। दुर्लभ मामिलाहरूमा, यो अदालतको आदेश पनि हुन सक्छ जुन सर्च इन्जिनको अनुक्रमणिकाबाट पृष्ठ हटाउने परिणाम हो।
म कसरी गुगल सजायबाट बच्न सक्छु?
निम्न जहिले पनि लागू हुन्छ: खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनमा विकासको साथ अप टु डेट राख्नुहोस्। प्रमुख गुगलका अद्यावधिकहरूका बारे पत्ता लगाउनुहोस्, किनकि यो गुगल एल्गोरिदमको अगाडि विकासको माइलस्टोनहरूको बारेमा हुनेछ। धेरै महत्त्वपूर्ण: यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले वेबमास्टरहरूको लागि गुगलका दिशानिर्देशहरू नियमित पालना गर्नुहुन्छ! थप रूपमा, तपाइँ निम्न गर्न सक्नुहुन्छ:
१. लिंकहरू खरीद वा बेच्नबाट जोगिनुहोस्
लि building्क निर्माण खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको एक कुनाको ढु .्गा हो। लामो समयको लागि, निम्न सत्य थियो: जति धेरै डोमेनले ब्याकलिks्कहरू प्राप्त गर्दछ, त्यति नै राम्रो थियो - यी लि links्कहरूले कुनै थिमेटिक अर्थ बनाएको छ वा छैन भन्ने कुराको पर्वाह नगरी। त्यसैले ब्याकलिks्कहरू बेचिन्थ्यो र व्यापक रूपमा खरीद गरियो। जे होस्, यसले गुगलका दिशानिर्देशहरूलाई उल्ल .्घन गर्दछ र त्यसैले लिंकहरू जुन पहिले एक बाट उपयोगी थियो SEO दृष्टिकोण हानिकारक ब्याकलिks्क भयो। प्रयोगकर्ताका लागि जोडिएको मानको साथ लिंकमा भर पर्न सिफारिस गरिन्छ।
XOVI प्रदर्शन उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् यसको ब्याकलिksक्स यसको गुणस्तरको लागि जाँच गर्न र हानिकारक लिंकहरू हटाउन।
२. तपाइँको वेबसाइटलाई अधिक अनुकूलन गर्नबाट बच्नुहोस्
यसलाई शुद्ध एसईओ उपायहरूसँग अधिक नबनाउनुहोस्। किनभने गुगलले तपाईलाई खोज ईन्जिनका लागि आफ्नो साइट अप्टिमाइज गर्न चाहँदैन, तर प्रयोगकर्ताका लागि। वा यसलाई अर्को तरिकामा राख्नको लागि: Google ले तपाईंलाई मुख्यतया यूईओ संचालन गर्न चाहन्छ - प्रयोगकर्ता अनुभव अनुकूलन। यद्यपि यो स्थापित अवधि होईन, यो फोकसको लागि उत्तम फिट हुन्छ। धेरै नै उपायहरू जुन तपाईको स्तर निर्धारणलाई स्पष्ट रूपमा लक्षित छन् स्वागत गरिन्छ।
Your. तपाईका लिंकहरूका लागि बिभिन्न एch्कर पाठहरू प्रयोग गर्नुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको एch्कर पाठ फरक गर्नुहुन्छ र तपाइँ जहिले कुञ्जी शब्दहरू वा यूआरएलको लागि समान हार्ड र अप्टिमाइजेसन एन्कर पाठ प्रयोग गर्नुहुन्न। कुञ्जीशब्दहरूमा केन्द्रित हार्ड लिंक पाठहरूले प्रयोगकर्तालाई लिंक (यूईओ!) पछाडिको सामग्रीको बारेमा पर्याप्त पृष्ठभूमि जानकारी दिँदैन र खोज इञ्जिनहरूको साथ धेरै लोकप्रिय छ किनकि यो केवल अप्राकृतिक हो।
तपाईंले श्रमपूर्वक तपाईंको ए your्कर पाठहरू मार्फत खोजी गर्नुपर्दैन, तपाईंले यो XOVI सुइटको लि tool्क उपकरणमा धेरै सहजै प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
D. नक्कली सामग्री र खराब गुणस्तरको सामग्री हटाउनुहोस्
सामग्री राजा हो - तर जुम्ल्याहा होइन। केवल अरूको सामग्री प्रतिलिपि नगर्नुहोस् (त्यो पनि चोरी हो र कानूनी समस्या हुन सक्छ) वा तपाईंको आफ्नै। यो विशेष गरी उत्पाद भिन्नताको लागि पसल पृष्ठका लागि सत्य हो। हो, यो कष्टकर छ। तर प्रयोगकर्ताले यसलाई नोटिस गर्दछ र ऊ छिटो सर्छ जहाँ उसले सामग्रीको मामलामा मान पनि थपियो बरु गडबडीको सट्टा। खोजी ईन्जिनले यो सबै याद गर्दछ तर कुन उत्पाद भिन्नतासँग तपाईं क्रमबद्ध गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यसले क्यानिबलाइजेशन कुञ्जी शब्दमा डोर्‍याउन सक्छ
यदि यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न असम्भव छ कि सामग्री धेरै मिल्दो छ (जस्तै उत्पादन भिन्नताहरू), तब क्यानोनिकल ट्यागहरूसँग काम गर्नुहोस्। यसले तपाईंको कुनै एक उत्पाद रूपलाई मौलिकको रूपमा चिनो लगाउँदछ र यो URL लाई अन्य सबै भेरियन्टहरूको लागि सन्दर्भ गर्दछ। त्यसो भए खोज ईन्जिनले ठेस खानेछैन र आफूलाई यी प्रश्नहरू सोध्नुपर्दैन कि यी भिन्नताहरू कुन महत्त्वपूर्ण छ।
क्यानोनिकल ट्यागहरूले यसैले अधिक स्थिर श्रेणीकरणमा लैजान सक्छ: तपाईंसँग SERPs मा केवल एक यूआरएल छ, तपाईं अब आफैंसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्न र सर्च ईन्जिनले लगातार यो परीक्षण गर्न पर्दैन कि कुन परिवेशले कुन स्थितिमा राम्रोसँग काम गर्दछ।
Make. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको साइट मोबाइल उपकरणहरूको लागि अनुकूलित छ
तपाईलाई यो सायद थाहा छ: निकटतम रेस्टुरेन्टको लागि खोजी गर्न सेल फोन तानिन्छ। त्यहाँ बाटोमा पनि, र ट्रेनमा तपाईं समाचार पढ्नुभयो वा मोबाइल फोनमा तपाईंलाई मनपर्ने विषयहरूको बारेमा फेला पार्नुहुनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि प्रयोगकर्ताहरू कुनै पनि समस्या बिना उनीहरूको मोबाइल फोनको साथ तपाईंको वेबसाइटको वरिपरि घुम्न सक्छन्। मार्च २०१ 2018 मा सुरू भएको गुगलबाट मोबाईल पहिलो अपडेटले कसरी मोबाइल-अनुकूलित साइट कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउँदछ। मार्च २०१ from बाट गुगल कोर अपडेटले पनि संकेत गर्दछ कि मोबाइल पहुँचयोग्यता (प्रयोगकर्ता अनुभवको साथ) बढ्दो महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ।
तपाईंको वेबसाइटलाई पहिले मोबाइलको लागि फिट बनाउनको लागि, लोड गर्ने समय द्रुत हुनुपर्दछ। पृष्ठहरू छिटो लोड गर्नका लागि सामान्य अवरोध छवि फाईलहरू हुन् जुन धेरै ठूला हुन्छन् वा वेबसाइटहरू पूर्ण लोड हुन्छन्। प्रोग्रेसिभ वेब अनुप्रयोगहरू (PWA) र एक्सेलेरेटेड मोबाइल पृष्ठहरू (एएमपी) दुई तरिकाहरू छन् जसमा तपाईं मोबाइल प्रथमलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ कस्ता प्रकारका दण्डहरू छन्?
जब यो गुगल द्वारा जरिवानाको कुरा आउँछ, भिन्नता मुख्यतया एल्गोरिथ्मको कारण हुने दण्ड र म्यानुअल पेनाल्टीहरूको बीचमा गरिन्छ। पूर्व एल्गोरिथ्म द्वारा थोपाईन्छ यदि यसले तपाईंको पृष्ठ क्रल गर्ने बेलामा गुगलका दिशानिर्देशहरूको उल्लंघन पत्ता लगाउँदछ। यी दण्डहरु यसको बिरूद्ध हुन सक्छ:
केहि खोजशब्दहरूको लागि श्रेणीकरण;
न्यायाधीश पोइन्ट १ देखि the एल्गोरिथ्मको जरिवाना तोड्छ। पोइन्ट then त्यसपछि मैन्युअल पेनल्टीमा थप विवरणहरूमा जान्छ।
१ कुञ्जी शब्द स्तर
एक कुञ्जी शब्द दण्डको अर्थ यो हो कि तपाइँलाई विशेष कीवर्ड वा केही अधिकको लागि SERPs मा शीर्ष पदहरूबाट प्रतिबन्ध लगाइनेछ। अन्य कुञ्जी शव्दहरूको लागि श्रेणीकरण प्रभावित हुँदैन, केवल व्यक्तिगत।
यदि तपाईंको डोमेन नम्बर १ वा पहिलो पृष्ठमा विशेष कुञ्जी शब्दको लागि हप्ताहरू वा महिनाहरूको लागि भएको छ भने, यो कुञ्जी शब्दको लागि तपाईंको स्थान अचानक बिग्रन्छ। प्राय: डोमेनले खोज परिणामहरूमा अचानक गुगल खोज परिणाम पृष्ठको पृष्ठ or वा to वा further मा क्र्यास गर्दछ।
२. URL वा निर्देशिका स्तर
यस पेनाल्टीको साथ, एक विशेष निर्देशिका वा डोमेनको विशेष यूआरएल प्रभावित छ, कुन किवर्डहरूको लागि यसलाई लिईएको ख्याल नगरीकन। यो राम्रोसँग हुन सक्दछ कि डोमेनको एक सबपाना धेरै कुञ्जी शब्दहरूको लागि दर्ता हुन्छ। यो व्यापक सामग्री संग पनि धेरै सम्भावना छ। यदि यस उपपृष्ठलाई दण्डित गरिएको छ भने, यस यूआरएल को लागी सबै रैंकिंगहरु दण्डित हुनेछ। उपपृष्ठ वा एक सम्पूर्ण निर्देशिका या त Google अनुक्रमणिकाबाट हटाइनेछ वा परिणाममा धेरै टाढा फिर्ता फेला पर्नेछ।
Do. डोमेन वा सबडोमेन स्तर
जरिवाना डाइरेक्टरी वा यूआरएल स्तरमा जरिवानाको समान हो, तर सम्पूर्ण डोमेन वा उप डोमेनका लागि यो अनुक्रमणिकामा रहन्छ; र यूआरएलहरू अझै पनी एक साइट क्वेरी मार्फत फेला पार्न सकिन्छ, तर तपाईंको क्रम निर्धारण हरायो। गुगल प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको वेबसाइट फेला पार्न सक्नेछैनन्। गुगलमा सबै स्थानहरू सकिसकेका छन्। XOVI सुइटमा OVI मानले त्यसपछि मान शून्य र कुनै अधिक श्रेणीबद्ध कुञ्जी शब्दहरू देखाउँदछ।
डिन्ड्याक्सि del (डेलिस्टि called पनि भनिन्छ) सबैभन्दा गाह्रो गुगल पेनल्टी हो। यसका सबै सब-पृष्ठहरूको साथ डोमेन पूर्ण रूपमा अनुक्रमणिकाबाट हटाइएको छ र खोज इन्जिनहरूको डेटाबेसबाट हटाइएको छ। एउटा साइट क्वेरीले त्यसपछि कुनै पृष्ठहरू प्रदर्शन गर्न सकिँदैन भनेर देखाउँदछ। निम्न उदाहरण हेर्नुहोस्:
गुगल पेनल्टी साइट खोजी
दिशानिर्देशन वा डिन्ड्याक्सि usually सामान्यतया दिशानिर्देशहरूको एक ठूलो उल्लंघन वा विभिन्न उल्ल .्घनहरूको संचयको कारणले अनुसरण गर्दछ। अदालतको आदेशले पनि गुगललाई अनुक्रमणिकाबाट सम्पूर्ण डोमेनहरू हटाउनमा परिणाम दिन सक्छ।
Spam. गुगल स्प्याम टोली द्वारा मैन्युअल कार्य
पहिले जाँच गर्नुहोस् कि तपाईको पृष्ठ गुगल एल्गोरिथ्म वा म्यानुअल मापन द्वारा दण्डित गरिएको छ कि छैन।
भिन्नता यो छ: तपाईंलाई एक स्वत: पेनल्टीको बारेमा सूचित गरिने छैन, तर एक म्यानुअल।
यसैले सबै एसईओ को लागी खोजी कन्सोल मा यसको डोमेनहरू सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ तपाईंलाई म्यानुअल दण्डहरू बारे पनि जानकारी दिइनेछ। थप रूपमा, त्यहाँ खोज कन्सोल सेट अप गर्न को लागी धेरै कारणहरू छन्।
तपाईं खोजी कन्सोल मेलबक्समा र "खोज प्रश्नहरू"> "मैन्युअल उपायहरू" अन्तर्गत म्यानुअल पेनल्टीको सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ:
गुगल पेनल्टी खोज कन्सोल
यस अवस्थामा, कुनै म्यानुअल स्प्याम उपायहरू छैनन्। यदि डोमेनले यसको दृश्यता हरायो भने, एक स्वत: अपडेट कारण हुन सक्दछ।
दुर्भाग्यवस, गुगलले सूचनामा ठ्याक्कै प्रकट गर्दैन जुन कसले दण्ड लगाई दण्ड लिन पर्छ भन्ने बारे उपायहरू लिनुपर्दछ। जे होस्, स्प्याम टोलीले सुराग दिन्छ, उदाहरण को लागी जब यो अप्राकृतिक लिंक बिल्डिंगको कुरा आउँछ। माथि तीन उदाहरण लिंकहरू दिइन्छन् जसले पेनाल्टी निम्त्याउँछ। यद्यपि यो पूर्ण सूची होईन, केवल उदाहरणहरू।
म्यानुअल दण्डको सबैभन्दा सामान्य कारणहरू हुन्, उदाहरणका लागि, अप्राकृतिक ब्याकलिंक्स, ढोका मार्गहरू, क्लोकिaking र स्पाम।
अवश्य पनि तपाई XOVI सुइटसँग खोजी कन्सोललाई लिंक गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईंसँग एक नजरमा सबै डाटा हुन्छ।
दण्ड कति लामो हुन्छ?
यहाँ पनि, एल्गोरिथमिक दण्ड र म्यानुअल मापनको बीच भिन्नता हुनुपर्दछ।
Google द्वारा एक क्रल पछि पेनल्टीका कारणहरू फेला पार्न नसकेकै क्षणमा एल्गोरिथ्म दण्डलाई हटाइन्छ। एल्गोरिथ्म त्यसपछि दण्डनीय संकेतहरु को लागी प्रतिक्रिया छैन र सामान्यतया जरिवाना बाट पूर्ण रुपमा डोमेन जारी गर्दछ। र्याकिंगको घाटा सामान्यतया पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति दिइन्छ।
म्यानुअल दण्डको अवस्थामा, पुन: जाँचको लागि अनुरोध, एक तथाकथित पुनर्विचार अनुरोध, गुगलमा पेश गर्नुपर्नेछ। यो खोज कन्सोल मार्फत काम गर्दछ। त्यहाँ उल्ल .्घन गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंले उल्ल .्घन गरेको नियम उल्लंघन हटाउन के कस्ता उपायहरू गर्नुभयो। अनुरोध पाउने बित्तिकै गुगलको टोलीले यी अनुरोधहरूको मूल्याates्कन गर्दछ र गुगल पेनल्टी रद्द गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्दछ। त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि रिभोकेसन हुनेछ र गुगलको स्वोविवेकमा छ। यदि पहिलो अनुप्रयोग रद्द गरिएको छैन भने, तपाईं जहिले पनि नयाँ अनुप्रयोग सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, यो मात्र सफलताको उच्च संभावना छ यदि वेबमास्टरले थप कदम चालेको छ भने।
गुगलले उनीहरूको वेबमास्टर गाईडमा पुन: परीक्षाको लागि आवेदन दिनको प्रक्रियाको व्याख्या गर्दछ।
म कसरी गुगल पेनल्टी ठीक गर्न सक्छु?
तपाईको डोमेनले यसको दृश्यता मेनुअल मापन मार्फत वा Google एल्गोरिथ्मबाट जरिवाना मार्फत गुमाएमा वास्तवमा केही फरक पर्दैन। यो अब महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले दण्डलाई द्रुत रूपमा हटाउनु पर्छ रंकण, ट्राफिक र पाठ्यक्रमको बिक्रीको सर्तमा अरु घाटालाई छिटो प्रतिकार गर्नका लागि।
गुगल पेनल्टी ठीक गर्न, तपाईले पहिले खोज्नु पर्छ कि अधिकतम दण्ड तिर्नु पर्ने कारण के हो। गुगलले म्यानुअल कारबाहीको मामलामा तपाईलाई सर्च कन्सोलमा निर्देशनहरू दिइनेछ।
एल्गोरिथमिक दण्डहरु को मामला मा, तपाईले कुनै जानकारी प्राप्त गर्नु हुने छैन। त्यसोभए तपाईले एसईओ शर्लक निकाल्नु पर्छ तपाईमा। हालसालै जाँच गर्नुहोस् कि (शायद लामो पुरानो पुरानो) SEO उपायहरू जुन बाहिर गरिएको छ, Google गुणवत्ता दिशानिर्देशनहरूलाई उल्ल .्घन गर्‍यो र यसरी विगतका गुगलका अपडेटहरूका ध्वनिहरू बनाउँदछ।
यदि त्यो केस हैन भने, त्यसोभएको जाँच गर्नुहोस् यदि त्यहाँ भर्खरको गुगल अपडेट छ कि जसले तपाईंको वेबसाईटलाई नासोव पठायो। त्यो उदाहरणको लागि, २०१ 2018 को गर्मीमा तथाकथित 'चिकित्सा अपडेट' मा वा भर्खरै मार्च २०१ 2019 मा कोर अपडेटमा।
XOVI सुइटको OVI ले तपाईंलाई टाइमलाइनमा माइलस्टोनहरू पनि देखाउँदछ, जुन प्रमुख Google अपडेटहरूले पुष्टि गर्दछ। यसले तपाईंको दृश्यता ढल्किएको समयमा र यसको बारेमा के थियो त्यसमा गुगल अपडेट थियो कि भनेर अपेक्षा गर्न सजिलो हुन्छ।
जहाँसम्म, गुगलको अपडेट्स प्रयोग गर्ने बेला कूल टाउको राख्नु महत्त्वपूर्ण छ र केहि दिन पर्खनुहोस् कि तपाईंको क्रमवारी आफैंमा समातियो कि भएन।
गुगल द्वारा जरिवाना ले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ। यदि खोजी परिणाम पृष्ठहरूमा पृष्ठहरूको दृश्यता घट्छ वा हराउँदछ भने केही सम्भावित ग्राहकहरूले तपाईंको वेबसाइट पाउनेछन्। परिणाम: नयाँ अर्डरहरू ड्रप वा पतन, र बिक्री असफल। विशेष गरी जब ट्राफिकको ठूलो मात्रा Google बाट आउँदछ, प्रभाव नाटकीय हुन सक्छ।
शुभ समाचार: तपाईं दुबै एल्गोरिथम पेनाल्टी र म्यानुअल स्प्याम उपाय दुबैबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ - कम्तिमा धेरैजसो समय। गुगलले ग्यारेन्टी दिदैन, तर हामीले धेरै डोमेनहरू देख्यौं जुन जरिवानाबाट पुन: प्राप्त भयो।
SEO मा रुचि छ? हाम्रो अन्य लेखहरूमा जाँच गर्नुहोस् Semalt ब्लग।